Bankiga Adduunka oo dib usoo celiyey xiriirkii Soomaaliya |
Bankiga Adduunka ayaa shalay sheegay inay dib usoo celiyeen xiriirkii ay dawladda Soomaaliya la lahayd Bankiga Adduunka 30 sano kadib.
Bankigu waxa uu sheegay inay tani ka dhigan tahay inay fursado u furto dawladda Soomaaliya, fursadahaas oo ay ka mid yihiin inay Soomaaliya hesho deeqaha uu bixiyo Bankiga Adduunka iyo inay wadashaqayn la lahaato dhammaan laamaha Bankiga Adduunka, si ay Soomaaliya usoo jiidato in la maalgashado, gacanna looga gaysto degganaansnhaha iyo horumarka waddanka.
Tallaabada Bankiga Adduunka ayaa timid 24 saac kadib markii hay’adda lacagta Adduunka IMF ay iyaduna sheegtay inay heshay yabooh ku filan inay hady’addu dhinaceeda daymaha ka khafiifiso Soomaaliya.
IMF wxaay sheegtay inay yaboohaas oo dhan US$334 million ka heshay in ka badan 100 xubnood oo ku jira.
Haatan Bankiga Adduunku waxa uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid muhiim ah. Waxa lagu sheegay war saxaafadeedka Bankiga Adduunka inay qayb ka soo qaateen sidii Soomaaliya looga caawin lahaa inay halkan soo gaarto taasi oo ay qayb ka ahayd lacag dhan $250 million oo deeqo hordhac ah ahaa si loo dedejiyo horumarka waddanku samaynayey ee dhinaca isbeddellada iyo bixinta adeegyo.
Baniga Adduunka waxa uu sheegay in Soomaaliya ka faa’iidaysan doonto dayn cafinta ay helayso marka la raaco daymaha laga khafiifiyo waddamada faqiirka ah ee daymaha culus lagu leeyahay. Daymaha la filayo in badankooda laga khafiifiyo Soomaaliya ayaa ah $5.3 bilyan oo doollar.